राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी सुरू | चितवन पोष्ट दैनिक
राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी सुरू
‘बन्द हडताल रोके आर्थिक सम्वृद्वि’
भरतपुर । चितवन उद्योग संघको आयोजनामा बिहीबारदेखि राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी–२०७० सुरू भएको छ । संघको परिसर भरतपुरमा भएको प्रदर्शनीको विना विभागीय मन्त्री डा. रामशरण महतले उद्घाटन गर्नुभयो ।
प्रदर्शनी उद्घाटनअघि संघको परिसरबाट झाँकीसहितको शोभा यात्रा निकालिएको थियो । शोभा यात्रा चितवन उद्योग संघको महोत्सव परिसरबाट सुरू भई बाइपास रोड, जिल्ला प्रशासन चोक, हाकिम चोक, चौवीसकोठी चोक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै पुनः प्रदर्शनी स्थल पुगेको थियो ।
प्रदर्शनीको समुद्घाटन गर्दै विना विभागीय मन्त्री डा. रामशरण महतले औद्योगिक विकासका लागि बन्द, हड्ताल, अराजकता रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहा“ले कम्तीमा पा“च वर्षसम्म बन्द हड्ताल रोके देशमा आर्थिक वृद्वि हुन सक्ने बताउनुभयो । मन्त्री महतले सरकारले उद्योग चलाउने नभई निजी क्षेत्रलाई उद्योग संचालनको वातावरण तयार गरिदिने मात्र भएको बताउनुभयो ।
सरकारी उद्योगहरु कर्मचारी तलव, उद्योग संचालन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने गरेकाले सरकारले सधैँ रकम दिएर उद्योग संचालन गर्नुको औचित्य नभएको बताउनुभयो । चितवनमा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थलको अभावका विषयमा मन्त्री महतले जिल्लामा एक ढिक्का भएर प्रदर्शनी स्थलका लागि स्थान छनौट गरी आएमा सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहा“ले उद्योग संघको परिसरलाई यसको आधार बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
समारोहमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले व्यवसायिकता सिर्जना गर्न सरकारले प्रशस्त अनुदान व्यक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रत्येक क्षेत्र तोकेर सरकारले आवश्यकबमोजिम अनुदानको व्यवस्था गर्न सकेमात्र व्यवसायिक सिर्जना र एकता हुनसक्ने बताउनुभयो ।
उहा“ले पोल्ट्रीको क्षेत्रमा भएको क्षति सरकारले परिपूर्ति गर्न नसके देशको अर्थतन्त्रमा नै संकट पर्न सक्ने बताउनुभयो । उहा“ले यसका लागि सरकारलाई सजग रहन आग्रह गर्नुभयो ।
समारोहमा चितवन क्षेत्र ३ का निर्वाचित सभासद कृष्णभक्त पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक जिल्ला सभापति भूपतिदास सापकोटा, एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर ढकाल, नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष जगन्नाथ थपलिया, राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिना, राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष रामहरि कँडेल, राष्ट्रिय जनमुक्तिका अध्यक्ष टेकबहादुर थापा, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष सुरेश प्रधान, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट, मौरीपालक महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र गौतमलगायतले मन्तव्य दिएका थिए ।
‘छिट्टै सरकारको पूर्णता’
यसैबीच सरकारका बिना विभागीय मन्त्री डा. रामशरण महतले नेपाल प्रेस युनियन जिल्ला शाखा चितवनले भरतपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (एमाले)सँग सहमति भई छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुभएको छ । मन्त्री महतले गृहमन्त्री एमालेलाई दिने सहमति नभएको दोहो¥याउनुभयो । ‘सहमति भएको छैन, त्यही अडानमा नेपाली कांग्रेस छ,’ महतले भन्नुभयो, ‘एमालेको पनि सोही अडान छ, पार्टीले अडान लिन्छन् र पुनर्विचार पनि गर्छन् । त्यसैले एउटा टुङ्गोमा छिट्टै दलहरू पुग्छन् ।’
दुई दलबीच छलफलका क्रममा सातबुँदे सहमतिबाहेक अन्य कुनै पनि सहमति नभएको भन्दै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका मन्त्री महतले यसलाई विवादका रूपमा चर्काउनु आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।
मन्त्री महतले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित निर्देशन दिएको आफूले थाहा नपाएको बताउनुभयो ।
मन्त्री महतको भन्नुभयो, ‘स्थानीय निकायको निर्वाचनले प्रतिस्थापन गर्दैन । चुनाव पनि हुन्छ । संविधान पनि बन्छ ।’ मन्त्रालयको विषय सहमतिमा टुङ्गो नलागेकाले आफूले बिना विभागीय मन्त्रीको पद स्वीकारेको उहाँले बताउनुभयो ।